Hiring The Best Employee & Outsourcing Your Payroll - Ammon | HR Outsourcing Services
Hiring The Best Employee & Outsourcing Your Payroll
Hiring The Best Employee & Outsourcing Your Payroll – Free HR Seminar
ယနေ့ ခေတ်ကြီးမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှု့ ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါပေါများများ ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိနေပါပြီ။ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ရရှိဖို့ ကလည်း company HR များနှင့် management တို့မှ အပြိုင်အဆိုင် ရှာဖွေလာ ကြရပါပြီ။
အထူးစီးပွားရေးဇုံများမှာ ရှိနေကြသော လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်း များ ရရှိရန် လမ်းခရီး သွားလာရခက်ခဲခြင်း ၊ အချိန်ကုန်ခြင်း ၊ ငွေကုန်ကြေးကျ ပိုမိုကုန်ကျခြင်း စသည့် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ မှု့များအား အများဆုံး ကြုံတွေ့ နေရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသော လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?
Ammon Consulting (Myanmar) မှ အမြန်ဆုံး ၊ စိတ်အချရဆုံး ၊ အသင့်တော်ဆုံး ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ ရရှိ နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းများ၏ လစာ တွက်ချက်သည့် အပိုင်းတွင်လည်း အများဆုံး ဖြေရှင်းရသော Attended Collection, Overtime Collection , Overtime Rate သက်မှတ်ပုံ ၊ Overtime တွက်ချက်မှု့ ပုံစံ များအပြင် Tax Calculation များကိုပါ တင်ပြဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည် စိတ်ချရပြီး အချိန်ကုန် ငွေကုန် သက်သာစေမည့် Payroll Outsourcing လုပ်ငန်းစဉ်များအား Free Seminar တွင် လာရောက် လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
Myanmar Japan Thilawa Development Co., Ltd
1st Floor, Multipurpose Hall 1, MJTD Office, Thilawa SEZ , Kyauk Tan Township.
Tel : 09 401064708 , 09 449611667 , 09 401520365
Email : thurein.winsoe@ammonglobal.com , yumon.chit@ammonglobal.com , thiri.yadanarkhin@ammonglobal.com
Nowadays, there arealot of job opportunities in different industries everyday. Due to the need of well experienced employees in each corporation, each and individual HR from corporations are in competition to get the employees that they are looking for.
Employers in Special Economic Zone are facing difficulty to hire the qualified & suitable candidates for their business due to distance of daily commute, transportation cost, and etc.
How can we resolve current situation that employers are facing in Myanmar?
Ammon Consulting is here to find best solutions & resolve matter in timely fashion for employers that are facing difficulty with HR process.
Ammon Consulting provide Payroll Outsourcing Service with affordable service fee for employers. Our experienced Payroll Manager will discuss about method of calculation on attended, overtime, and tax rates collection.
Please come experience our free seminar on Payroll Outsourcing for you to benefit your business.
How to apply jobs in3steps?
Why company should outsource payroll during covid 19
Copyright © 2020 Ammon | HR Outsourcing Services | Powered by Kite Media